I-Apple Watch Series 8 iya kuba noyilo olufanayo njengeSeries 7 | Iindaba ze-iPhone
I-Apple Watch Series 8 iya kuba noyilo olufanayo nochungechunge lwe-7
UJordi Gimenez | 22/11/2021 10:00 | Apple Watch
Ngale nto ayithethi ukuba nangaliphi na ixesha iiwotshi ze-Apple zimbi, kude kuyo. Imodeli yangoku ye-Apple Watch Series 7 yafika emva kothotho lwamahemuhemu axela kwangaphambili uthotho lweenguqu zobuhle ezingazange zifike. Ngoku emva kweentsuku ezimbalwa apho kunokwenzeka ukuba imodeli elandelayo ye-Apple Watch inokongeza ukuba utshintsho loyilo lwaluqwalaselwa @LeaksApplePro kunye iDropNews vala ucango kolu hlengahlengiso loyilo.
Ngaba ngokwenene kuyimfuneko ukutshintsha uyilo?
Enye yamathandabuzo abasebenzisi abaninzi be-Apple abanayo ngokuchanekileyo malunga noku, ngaba kuyimfuneko ukutshintsha uyilo? Isidingo sokutshintsha uyilo lwewotshi ayifanelanga wonke umntu kwaye kukuba iimodeli zangoku zilungile kwaye zikhululekile izixhobo zokunxiba. Ndicinga ukuba le modeli yamva nje ilungile kwaye inokuhlala iminyaka embalwa ngaphambi kokuba bathathe isigqibo sokutshintsha uyilo lwetyala. Inesikrini esikhulu, ibonelela ngombono woyilo ofana neemodeli zokuqala kodwa ibhityile kakhulu kwaye ngaphezu kwayo yonke into inamandla ngakumbi.
Ukongeza uyilo olusisikwere ngakumbi njengoko kubonwa kwezinye iinguqulelo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo unakho okanye ungathandi, asizukuxoxa ngoku, into esinokuthetha ngayo yeminye imifanekiso evuzayo ye-CAD ye-Apple Watch Series 8 ebonisa utshintsho oluncinci. kwimodeli yangoku. Ngokurhabaxa ekuphela kwento esiyibonayo eyahlukileyo kuyilo lwesithethiSiza kubona ukuba kwenzeka ntoni kwiinyanga ezizayo njengoko kusekude ukuba kuhanjwe ngaphambi kokufika kwesizukulwana esitsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » I-Apple Watch Series 8 iya kuba noyilo olufanayo nochungechunge lwe-7
I-Satechi ine-MagSafe ehambelana ne-3-in-1 tshaja ye-iPhone, i-AirPods kunye ne-Apple Watch.
Ukuthelekisa phakathi kwe-AirPods 3 kunye neBeats Fit Pro